China Classic bhatiri yemagetsi munyu uye pepper chigayo ESP-1 vagadziri uye vanotengesa | Trimill
Izvo zvakakurudzirwa magetsi munyu uye mhiripiri mukuyi set inogona kukuya akasiyana zvigadzirwa, senge gungwa munyu, dema mhiripiri, mhino, kumini, nezvimwewo, zvimwe zvinopisa zvidimbu zvidiki zvinogona kukuya, uye ukobvu hunogona kugadziriswa.
Kuvhiya kwacho kuri nyore uye kuri nyore. Iyo munyu mukuyi inogona zvakare kushandiswa kukuya chikafu chinowedzera chevacheche. Zvakafanana nembeu yesesame, pane maviri ekugaya mumakamuri ekudyira nekubikira: imwe yemunyu uye imwe mhiripiri, iyo inogona kushandiswa kune ese maChinese neWestern chikafu;
Muviri webhodhoro magetsi munyu pepper grinder chakagadzirwa nesimbi isina chinhu 304, iri yakachengeteka, isina chepfu uye isingakuvadzi, yakaoma uye inopfeka isingagadzirike, uye iri nyore kuchenesa. Iyo magetsi pepper grinder zvakare inoita kuti zvinyorwa zvive zvakapfava uye zvinoshanda; iyo yekupfeka-inodzivirira zvedongo kufamba ine yakanyanya kukwirira kuomarara, ichibvumira kuti zvinonhuwira zvive pasi Izvo zvakanyanya kugadzikana, isina-chepfu, isiri-kusvibisa, anti-oxidation, uye isiri nyore kuita ngura. Iyo yakasarudzika isiri yesimbi zvivakwa zve ceramics haigone kuburitsa pores uye zvinobudirira kuramba kukura kwebhakitiriya. Zvizhinji mhino mhiripiri inogona chete kukuya imwechete ukobvu, izvo zviri nyore kukuya zvisina kuenzana. Iyi grinder ine dhizaini yakanakisa. Iwe unongoda kudzora kuomarara kwevhavha inodzora kuti uone kukora kweiyo yekugaya hupfu, iyo inogona kuzadzisa zvaunoda zvakanyanya zvekubika, uye simba racho rakaenzana. Iti taura zvakanaka kune kadhi slot uye usakuya. Iyo inonetsa uye inounza iwe mushe chiitiko.Magadzirirwo emabhatiri mana anounza simba rakasimba, mabhatani ari nyore uye akasimba, akawedzera akakwira-magumo, uye ruoko rwunonzwa rwakanakisa.
Iwe unofanirwa kuve ne pepper grinder iyo ine akawanda mabasa mune imwe, uye yakanyanya mutengo-inoshanda pepper grinder.
Pashure: Mugadziri Pepper Kukuya Kofi Grinder Ceramic Kukuya Core
Zvadaro: Manual Spice Munyu Pepper Mill Neakasiyana mwaka
Munyu Uye Pepper Mills